Sazy noho ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo | LawyersUAE
Sazy noho ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo any UAE
Herisetra an-tokantrano sy fanararaotana ara-nofo any UAE
Hatramin'ny vao haingana, rehefa nanao andianà fanovana ara-dalàna ny Emirat Arabo Mitambatra (UAE), dia azon'ny lehilahy atao ny 'manafay' ny vadiny sy ny zanany tsy misy vokany ara-dalàna, raha mbola tsy misy marika ara-batana. Na dia eo aza ny fanakianan'ny vondrona iraisam-pirenena sy eo an-toerana momba ny zon'olombelona, ​​dia nanao dingana mandroso amin'ny fomba fiasany amin'ny herisetra an-tokantrano i UAE, indrindra tamin'ny fahalasanan'ny Politika momba ny fiarovana ny fianakaviana amin'ny taona 2019.
Ny Politika dia manitatra ny famaritana ny herisetra ao an-tokantrano mba hahitana izay fanararaotana, herisetra, na fandrahonana ataon'ny mpianakavy iray miantefa amin'ny mpianakavy hafa izay miteraka ratra ara-batana na ara-tsaina. Amin'ny ankapobeny, ny Politika dia mizara ny herisetra an-tokantrano ho endrika enina, ao anatin'izany:
Fanararaotana ara-batana - miteraka ratra amin'ny vatana na ratram-po na dia tsy misy marika aza
Fanararaotana ara-tsaina / ara-pihetseham-po - ny fihetsika rehetra miteraka alahelo ara-pihetseham-po amin'ny niharam-boina
Fanararaotana am-bava - Miteny zavatra ratsy na mandratra ny hafa
Fanararaotana ara-pananahana - ny fihetsika rehetra izay miteraka herisetra ara-nofo na fanorisorenana ny niharam-boina
tsy fitandremana - Ny voampanga dia nandika izany adidy ara-dalàna izany tamin'ny alalan'ny fihetsika na ny tsy fihetsehana amin'ny fomba iray.
Fanararaotana ara-toekarena na ara-bola – ny fihetsika rehetra natao hanisy ratsy ny niharam-boina amin'ny fanalana ny zony na ny fahalalahana hamoaka ny fananany.
Na dia tsy afa-bela tamin'ny fanakianana aza ireo lalàna vaovao ireo, indrindra fa mindram-bola be amin'ny Lalàna Sharia Islamika, dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina izy ireo. Ohatra, amin'ny toe-javatra misy herisetra ao an-tokantrano, dia azo atao ny mahazo didy famerana amin'ny vady na havana manararaotra. Teo aloha dia afaka nihaona tamin'ireo niharam-boina ireo mpanao herisetra an-tokantrano ary, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia nampihorohoro sy nandrahona azy ireo na dia aorian'ny fanamelohana aza.
Sazy sy sazy noho ny herisetra an-tokantrano ao UAE
Ho fanampin'ny sazy efa misy, nametraka sazy manokana ho an'ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo ireo lalàna vaovao ireo. Araka ny Andininy faha-9 (1) ao amin'ny Lalàna Federalin'ny Emira Arabo Mitambatra No. 10 amin'ny 2019 (Fiarovana amin'ny herisetra an-tokantrano), ny mpandika lalàna momba ny herisetra an-tokantrano dia iharan'ny;
sazy an-tranomaizina hatramin'ny enim-bolana, ary/na
onitra hatramin'ny Dh5,000
Izay rehetra hita fa meloka tamin'ny fandikan-dalàna faharoa dia iharan'ny sazy avo roa heny. Fanampin'izany, izay mandika na mandika ny didy fameperana dia iharan'ny ;
telo volana an-tranomaizina, ary/na
onitra eo anelanelan'ny Dh1000 sy Dh10,000
Raha toa ka misy herisetra ny fandikan-dalàna, dia afaka mampitombo avo roa heny ny sazy ny fitsarana. Ny lalàna dia mamela ny mpampanoa lalàna iray, na noho ny fangatahan'ny niharam-boina, hamoaka didy fameperana mandritra ny 30 andro. Azo itarina indroa ny didy, ary aorian’izay dia tsy maintsy mangataka fanalavam-potoana fanampiny any amin’ny fitsarana ilay niharam-boina. Mety haharitra enim-bolana ny fanitarana fahatelo. Ny lalàna dia mamela hatramin'ny fito andro ho an'ny niharam-boina na ny mpandika lalàna mba hanao fanangonan-tsonia manohitra ny didy fampiatoana aorian'ny famoahana azy.
Fanamby mitatitra ny fanararaotana ara-nofo any UAE
Na dia eo aza ny fandraisana fepetra lehibe hanampiana na hiadiana amin'ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo, anisan'izany ny maha-mpanao sonia ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny fanafoanana ny endrika fanavakavahana rehetra atao amin'ny vehivavy (CEDAW), UAE dia mbola tsy manana fitsipika mazava momba ny tatitra momba ny herisetra an-tokantrano, indrindra ny tranganà fanararaotana ara-nofo.
Na dia manasazy mafy ny fanolanana sy ny fanolanana ara-nofo aza ny lalàna federaly Emira Arabo Mitambatra, misy ny elanelana momba ny tatitra sy ny fanadihadiana miaraka amin'ny lalàna mametraka enta-mavesatra ho an'ilay niharam-boina. Ankoatr'izay, ny elanelan'ny tatitra sy ny fanadihadiana dia mametraka ny vehivavy ho voampanga ho nanao firaisana tsy ara-dalàna rehefa voaolana na nametaveta.
UAE miantoka ny fiarovana ny vehivavy
Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia manome tsiny ny fepetra sasany ao amin'ny Lalàna Sharia noho ny 'fanavakavahana' amin'ny vehivavy, raha jerena ny lalàna ao Emirà Arabo Mitambatra momba ny herisetra an-tokantrano dia manana fototra ao amin'ny Sharia. Na dia eo aza ny fahasarotana sy ny resabe manodidina ny lalàny, ny UAE dia nanao dingana mendri-piderana amin'ny fampihenana ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo. Na izany aza, ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra dia mbola manana zavatra betsaka atao mba hiantohana ny fiarovana ny vehivavy sy ny vondrona marefo hafa, anisan'izany ny ankizy, momba ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo.
Manofa mpisolovava Emirati any UAE (Dubai sy Abu Dhabi)
Izahay no mikarakara ny filanao ara-dalàna rehetra mifandraika amin'ny herisetra an-tokantrano ao UAE. Manana ekipa mpanolo-tsaina momba ny lalàna izahay mpisolovava mpanao heloka bevava tsara indrindra any Dubai hanampy anao amin'ny olanao ara-dalàna ao anatin'izany ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo any UAE.
Te hanakarama mpisolovava ianao, na inona na inona toe-javatra misy. Na dia mino ny tenanao ho tsy manan-tsiny aza ianao, dia hiantoka ny vokatra tsara indrindra ny manakarama mpisolovava matihanina any UAE. Raha ny marina, amin'ny toe-javatra maro, ny manakarama mpisolovava izay miatrika herisetra an-tokantrano sy raharaha fanararaotana ara-nofo tsy tapaka no safidy tsara indrindra. Mitadiava olona manam-pahaizana manokana amin'ny fiampangana mitovy amin'izany ary avelao izy ireo hanao ny asa mavesatra.
Manana fahalalana feno momba ny politikan'ny fiarovana ny fianakaviana Emirà Arabo Mitambatra izahay, ny lalàna UAE momba ny herisetra an-tokantrano, ary ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy. Mifandraisa aminay anio mba hahazoana torohevitra ara-dalàna sy fakan-kevitra momba ny heloka bevava amin'ny herisetra an-tokantrano dieny mbola tsy tara. Antsoy izahay izao mba hifampiresahana sy hifampidinika amin'ny Lalàna momba ny Fianakaviana sy Mpisolovava heloka bevava amin'ny +971506531334 +971558018669